Rafitra telo, tsena ary foto-kevitra vaovao. | Avy amin'ny Linux
Rafitra telo, tsena ary foto-kevitra vaovao.
Efa elaela izay no nolazaiko anao Firefox OS ary naneho hevitra momba ny tombony sy ny fatiantoka mety hitranga amin'ny tsena vao misondrotra toa an'i Amerika Latina izy. Ny zavatra dia Firefox OS Tsy io irery no rafitra manandrana mandroso miaraka amin'ireo hevitra vaovao ireo sy ny fiheverana ny fahalalahana ary miorina amin'ny HTML5 ho an'ny fampiharana azy; misy rafitra roa hafa manandrana mihinana sombin-mofo iray, izany dia Tizen y Sokafy WebOS.
Tsy ratsy velively ny fifaninanana, ny tena marina dia tsy izy, fa indraindray aho mipetraka mieritreritra fa efa be loatra ny tetikasa te-hitady toerana tokana eny an-tsena ary miaraka amin'ny ady amin'ny tsena miaraka amin'ny colossi Android y IOS.
Voalohany indrindra, nanomboka nitady izay atolotry ahy ireo rafitra vaovao ireo aho amin'ny haavon'ny mpampiasa izay tsy atolotry Android na IOS ahy, ary tsy dia sarotra loatra amiko ny mahita fa toy izany, amin'ny haavon'ny fampiharana na ny fampiasa dia tsy misy fahasamihafana lehibe, satria fotsiny isika Ny zava-baovao tsy mitongilana, ny haitao eo amin'ny sehatry ny fitaovana amin'izao fotoana izao dia mitombo amin'ny fahefatra fotsiny fa tsy amin'ny foto-kevitra vaovao, izany hoe manana efijery mikasika tsara tarehy kokoa isika, lehibe kokoa ary maranitra ary talohan'ny tsy nahitan'izy ireo izany, fa efa ela no nampiasainay ireo. efijery ary noho izany dia hijanona mandritra ny fotoana fohy mandra-pifindrazan'ny interface vaovao vaovao (efijery holographic angamba? Iza no mahalala).
Hatreto dia mifantoka amin'ny fitomboan'ny haitao ny teknolojia fampiharanaIreo izay manana zava-baovao bebe kokoa na latsaka atolotra ary ny iray dia mahita azy ireo bebe kokoa na tsy dia ilaina loatra arakaraka ny tranga, fa ny marina dia tsy zavatra atolotry ny rafitra iray ary iray hafa fa tsy satria amin'ny fotoana maharitra dia azonao izany na aiza na aiza. ; Ohatra, ny mahasakana ahy amin'ny maha mpampiasa ahy dia tsy hanana WhatsApp ao amin'ny rafitro aho (amin'ny voalohany Tizen, Firefox OS na Open WebOS), saingy satria fantatsika fa farafaharatsiny roa amin'ireo telo ireo dia manana fahaizana mitombo avo lenta, miresaka aho Tizen sy Firefox OS. Amin'ny farany, tsy manahy aho, na izany aza Apple sy Google Manolotra serivisy fanampiny toa ny Appstore na Google Play izy ireo, zavatra izay tsy dia misy ifandraisany amin'ny mpampiasa loatra satria mitady rindranasa mihoatra ny serivisy na sarimihetsika foana izy ireo; na dia mazava ho azy aza, tsy mihatra amin'ny rehetra foana izany, fa azo antoka fa hanana ny azy ireo rafitra vaovao ireo.
Eny, eo amin'ny sehatry ny mpampiasa dia azoko antoka fa hanana traikefa tsotra sy mahafinaritra aho, amin'ny zavatra rehetra ilaiko amin'ny voalohany, saingy misy zavatra hafa, tsy mpampiasa fotsiny aho, mpandrindra aho ary ho an'ny ny ahy dia teboka iray izay tokony ho raisina: Inona no atolotry ireo rafitra ireo ahy amin'ny haavon'ny fampandrosoana izay tsy ananan'ny Android sy IOS? ary eto no miditra ny antony lehibe fampiasana ireo rafitra ireo.
Voalohany indrindra, manolotra zavatra izay izy rehetra na Android na IOS dia tsy afaka manome sosokevitra mifanentana tanteraka eo amin'izy ireo, eny, compatibilidad, Afaka mamorona fampiharana aho ho an'ny Firefox OS ary alao antoka fa afaka mitondra izany aho raha tsy misy olana hafa Tizen na Sokafy WebOS Fa maninona Eny, satria nisafidy ny hampiasa ny fenitra manandanja indrindra amin'ity taona ity sy ny manaraka izy telo: HTML5 ary iray madio, tsy mila rafitra na zavatra manokana, fandaharana izay tianao, ataovy anaty browser izany ary azonao antoka fa hiasa amin'ny iray amin'ireo rafitra telo, vanim-potoana io. Android sy IOS Tsy azon'izy ireo atolotra izany, farafaharatsiny mba tsy izao satria ny iray mampiasa fenitra mikatona ho azy ankoatry ny politika henjana sy manan-kery amin'ny famoronana rindranasa (IOS) ary ny iray kosa mampiasa fenitra antitra, ratsy tarehy, maimbo ary maty ho mpanelanelana amin'ny fampandrosoana lehibe. mampiasa Java ho mpanelanelana amin'ny fampivoarana sy ireo fomba hafa hampiroboroboana ho azy (Phonegap, Python, sns) na dia miasa aza izy ireo, dia tsy haingana dia haingana toy ny Java amin'ny Android.
Izany rehetra izany dia mampiseho fa amin'ny fotoana maharitra raha misy ny ho avy amin'ireto rafitra fiasa vaovao ireto dia angamba iray ihany no ho tafavoaka velona na hipoitra, fa ny azo antoka dia tsy misy isalasalana fa ny iray na ireo izay velona dia hihinana tsena, tsikelikely, fa Hanao izany izy ireo ary hanery ny rafitry ny mpanjaka ankehitriny hanavao sy hitady fomba hivoarana, satria raha manana zavatra izy telo ireo, dia mora kokoa noho ny ankehitriny izy ireo.
Avelako ho anao ny horonan-tsary voalohany momba ny fandehanan'ireo rafitra ireo, avy eo hizaha toetra azy ireo ny tenako ary hanome anao ny fiheverako anao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Rafitra telo, tsena ary foto-kevitra vaovao.
Fa andao amin'ny ampahany, Mozilla Foudation nilaza fa ny OS ny FirefoxOS dia natokana ho an'ny terminal ambany sy midadasika satria fantatr'izy ireo fa ny mifaninana amin'ny Android amin'ny terminal avo lenta ary manandrana mivarotra azy amin'ny Samsung Galaxy na HTC dia tsy. mahasoa azy ireo, noho izany dia tsara kokoa ny mivarotra azy amin'ny telefaona mora vidy sy mora azo kokoa ho an'ny besinimaro "ny tiako holazaina dia ny maro an'isa" hahahahaha
Samsung dia efa nilaza fa amin'ny 2013 dia hivoaka ny telefaona voalohany miaraka amin'i Tizen ka hiandry isika hahita
aza manokan-tena hanao faminaniana momba ny fironana ara-teknolojia azafady, azafady, mandohalika aho
Tsy ilaina ny mandohalehanao, aleo mifoha ary hazavao ny antony tsy. xDD
Miombon-kevitra amin'ny hevitrao rehetra aho. Vato HTML5 fotsiny, minono Apple & Java.
Ny fanontaniako dia maninona no tsy? Ataovy araka ny voalazan'ny Proper, aza mandohalika fa aleo mifohaza milaza ny antony xD.
Ankoatra izany, tsy vinavina izy ireo, fankasitrahana manokana izy ireo, tsy misy azo vinavinaina amin'izao fotoana izao, raha ny tena izy, ny zavatra ataoko dia ny mieritreritra sy mino fa ireo sehatra ireo, na farafaharatsiny Tizen sy FirefoxOS dia manana fahaizana mifaninana amin'ny fanomezana. fotodrafitrasa sy vaovao ho an'ny mpamorona ary fiadanan-tsaina mitovy ho an'ireo mpampiasa farany, izay rehefa ela ny ela dia tsy handany fotoana firy hifanaraka amin'ireo rafitra ireo satria na iza na iza milaza fa mendrika izany dia mitovy amin'ny ambaratonga fampiasana avokoa izy rehetra.
Eny, mbola tsy hita ireo mpisolo toerana na dia HTML5 aza hoy izy ireo dia ny ho avy, tsy mino aho fa, raha mihinana loharanom-pahalalana toy ny OS ny FF dia mila indroa heny, na dia finday aza, ho fanampin'ny iray izay tsara indrindra mampihatra tag HTML5, kely ihany ny fanandramana azy Chrome, aleoko ny faharetan'ny Java sy Android alohan'ny HTML5, angamba raha misy zavatra toa ny MeeGo mivoaka
Bro, andramo ny tsy hiteny nefa tsy fantatro. Zavatra iray ho an'ny browser ny mandany loharano (izay ampidiriny) ary ny zavatra iray hafa dia ny rafitra iray miorina amin'ny motera mandany loharano. Tsy fantatro raha efa hitanao na novakianao ny momba ireo sehatra hiatrehan'ny rafitra (FirefoxOS), natao hihazakazaka amin'ny sehatra maotina miaraka amina processeur 512 ram sy 600ghz izy io.
Ny zavatra iray hafa, ny Java dia tsy vitan'ny hoe miadana sy ratsy tarehy ihany koa, tsy azo antoka koa, tena tsy azo antoka, hatramin'ny fahazoan'ny orinasa fiarovana tsy hametahana azy fa esorina amin'ny rafitra.
Ny fanontaniana amin'ny HTML5 dia hoe vao haingana kokoa noho ny Java na ny Apple Objective-C izy, saingy tsy isalasalana fa manana ho avy bebe kokoa izy io, tsotra izao satria be loatra ny fifantohana amin'ny fivoarany ary na ny lehibe aza efa miloka aminy.
Miverina amin'ny tsy miteny nefa tsy mahafantatra, ary mitazona ny fanajana, "Zavatra toa an'i MeeGo" ... Bro, Tizen dia taranaky MeeGo xD.
Toy izany koa, samy manana ny azy avy.
Miala tsiny Mhz, typo.
Tsy haiko raha efa hitanao na novakianao ny momba ireo sehatra hiatrehan'ny rafitra (FirefoxOS), natao hihazakazaka amin'ny sehatra maotina miaraka amina processeur 512 ram sy 600ghz izy io.
Ary ny Firefox (ny mpitety tranonkala) dia natao hihazakazahana am-pahamendrehana amin'ny Pentium 2 sy 64MB RAM ary hitantsika ny vokany.
Aza mino an-jambany amin'ny orinasa, dokam-barotra sy toky milaza zavatra fa tsy zava-misy.
Tizen dia ho taranaky MeeGo ary inona no ifandraisany amin'izany? mariho fa amin'ny MeeGo dia afaka manao na inona na inona amin'ny Desktop Linux ianao ... miaraka amin'i Tizen HTML5 fotsiny no ilazanao azy.
Na dia fiteny fandaharana HTML aza, HTML5 dia natao ho an'ireo pachorríos izay hanoratra ny kaody indray mandeha fotsiny ary ankehitriny ... amin'ny Android dia misy fampiharana marobe vita amin'ny HTML5, ary mahagaga ahy fa ny fahafantarana an'i Python dia mirona amin'ny HTML ianao, ny ankamaroan'ny mamela izy ireo satria ny CLOUD no ho avy. Ary ny foto-kevitry ny Cloud dia ao amin'ny Jolicloud OS, Chrome OS ary tsy nahomby izy ireo ... raha mora ny manoratra ny Kaody ... mandehana mampiasa windows, azo antoka fa amin'ny Visual Studio dia hanome fanampiana ho an'ny WP, tsy midika hoe reraka kaody manoratra ianao
Miverina amin'ny tsy fitenenana isika nefa tsy mahafantatra.
Mba hahamora ny fanaovana kaody ampiasaiko dia Python aho, tsy azoko hoe inona ny olanao amin'izany ary tsy azoko hoe manana ao an-doha ianao miresaka ratsy momba ny HTML5, azoko an-tsaina fa iray amin'ireo olona zatra mino ianao fa ianao mila manoratra kaody an-taonina raha te hiasa na mila manoratra programa mitovy amin'ny fiteny maromaro hametrahana azy amin'ny sehatra samihafa, tonga lafatra, miaina amin'ny taon-jato farany ianao, ry vady, saingy tsy dia manoratra kaody kely aho noho ny hakamoana, saingy satria manao azy io amin'ny fomba mahomby kokoa aho ary satria miasa ho ahy ilay fiteny. tsy toy ny java.
Raha ny marina dia milaza ianao fa ny HTML5 dia ho an'ny olona kamo ary tsy fantatro izay tianao holazaina fa ny rahona dia ny ho avy na hoe faly izy ireo amin'izany satria tsy haiko raha fantatrao izany, raha toa ka mihazakazaka fampiharana HTML5 teratany izy ireo , afaka miasa izy ireo nefa tsy misy ny fampiantranoana fampiantranoana amin'ny mpizara. Inona koa, mandritra ny fotoana maharitra dia tsy haiko akory hoe maninona ianao no mikasika ilay lohahevitra raha toa ka misy fampiharana amin'ny Android na IOS miasa amin'ny Internet sy ny mpizara, ilay rahona falifaly, amin'ny fahafantarana hoe ohatrinona ny angon-drakitra ampiasainao ka hatramin'ny fampakaranao isa mahonena. lalao amin'ny solaitrabe ary maro hafa…
Miresaka miresaka ianao ry zoky.
Zavatra tsy ampy ary toa zava-dehibe tamiko:
Miorina amin'ny MeeGo i Tizen, izay miorina amin'i Moblin sy Maemo. Maemo dia tao amin'ny teôria distro Linux tamin'ny findainao; mazava ho azy fa betsaka lavitra noho izany, fa raha tsorina dia tsotra.
Fa maninona i Maemo5 no tsy nahomby? Tsy noho ny Nokia tsy te hanohy ny fampandrosoana azy fa noho izy tsy sehatra natokana ho an'ny mpampiasa End ary mazava ho azy fa tsy ampy ny rindranasa na ny mpamorona hanome aina ny sehatra na ohatrinona na ohatrinona izany.
Ny zavatra iray hafa dia ny olona maro tsy te hanana birao eo an-tanany satria inona no tsy azonao eritreretina? Tsy azo ampiharina izy io, noho ny antony dia misy birao kely, solosaina finday sy finday; Ny fampiasana LibreOffice amin'ny efijery mikasika 5-inch dia tsy hitovy velively amin'ny fampiasana azy amin'ny keyboard, mouse, ary monitor 20 ″. Izany no antony nanilihana ny hevitra, satria na dia mahaliana aza izy io dia tsy azo ampiharina na mahasoa amin'ny fotoana maharitra satria tsy dia mora loatra ny fampandrosoana.
MeeGo dia noforonina mba hiasa amin'ny netbook ary namela ny fampiasana HTML5. Na izany na tsy izany, Tizen dia mandova ny fahafaha-ampiasaina amin'ny Netbooks toy ny MeeGo.
Inona no hany zavatra hanenenako? Tsy nanohy nampiasa QT izy ireo, saingy satria nandao ny MeeGo ny Nokia, dia nankany amin'ny fantsona ny zava-drehetra. Na izany na tsy izany dia tsy fantatro izay hevitra ilainao kokoa amin'ity, na izany aza, afaka manohy mampiasa izay tianao ianao, tsy ho faty ho anao ny tetikasa iray, tsy ho ahy. Raha maty izy ireo na manohy dia noho ny fanekena na fandavana ny be sy ny maro.
Raha tsy miteny ratsy momba ny HTML5 aho dia milaza fotsiny aho fa tsy fiteny fandefasana fandaharana io, izay tsy hainao akory satria manjavozavo i java, mieritreritra marina aho fa tsy tianao izany ary miorim-paka amin'ny hevitry ny tena manokana ny hevitrao, tsy manome antsipirihany teknika, Ho anao, HTML5 no mpampiantrano, saingy tsy mandray anjara na inona na inona momba ny enti-manana sy ny pitsopitsony ara-teknika ianao. Ary amin'ireo 3 SOs, ny iray izay mifantoka tsara indrindra amin'ny làlana dia WebOS, FF ary Tizen tsy mahalala hoe aiza no hitifitra, FF mbola mankahala an'i Google ho an'ny Chrome, ary Tizen, tsara dia zavatra sisa tavela amin'ny MeeGo, na dia miaraka amin'i Samgsung aza izy io. , Heveriko fa tsy hanome azy baolina akory izy ireo, na baolina aza tsy omeny an'i Bada.
Ny zavatra tokana hifaninanan'izy ireo dia ny hanohitra an'i symbian, indrisy fa tsy misy olona afaka manaloka ny android sy ny iOS
Miaraka amin'ilay zavatra HTML5, miala tsiny aho fa niteny toa ny nahalala zavatra betsaka ianao ary hitako fa tokony ho nazava tsara momba izany ianao satria raha ny marina dia betsaka ny voalaza.
Izao dia mifaninana amin'i Symbian ihany? Heveriko fa tsy ny elanelana hiadian'izy ireo amin'ny voalohany dia ny faritra ambany sy salantsalany ary izany dia Android mivantana ary, miankina amin'ny firenena, S40.
Ny tiana holazaina dia hoe misy olona maro foana vonona hanakiana na tsy hatoky zavatra ary tsy misy dikany amiko tsotra izao. Eny misy ny fahafaha-mifaninana, ohatra tonga lafatra ny Android rehefa nivoaka izy; Tsy afaka nifaninana tamin'ny IOS izany raha tsy efa ela taorian'ny nivoahan'ny kinova 2.x ary fotoana fohy taty aoriana dia afaka nihoatra ny endrik'i IOS izy io, saingy tsy tao anatin'ny 5 volana, naharitra taona maro. Ireo rafitra ireo dia tsy mikendry ny handroaka mpanjaka na hifaninana amin'ny sokajy avo lenta, fa ny fizarana hafa miaraka amin'ny foto-kevitra samy hafa ho an'ny fampandrosoana; Angamba indray andro any izy ireo dia hihoatra ireo izay manjaka ankehitriny, mety tsy izany, fa ny milaza fa tsy manana vintana dia mampihomehy.
Matoky tokoa aho fa ireo rafitra 3 ireo dia handany ampahany betsaka amin'ny tsena.
Mihevitra aho fa, ary manatevin-daharana ny fanohanan'ity "fironana" ity. Ny zavatra iray fironana dia tsy ho fanamafisana ny fandehanana amin'ny lalana marina, fa anjaran'ny tsirairay ny manohana ny iray na ny iray hafa, na tsia.
Amin'ny zavatra hitako amin'ireo horonantsary, ary amin'ny maha-fiheverana manokana ahy dia mahita ireo tizen efa matotra be aho tao anatin'ny fotoana fohy. Tsy misy tabataba fa misintona kilometatra maro.
Heveriko ihany koa fa mbola lavitra ny lalan'izy ireo ary lavitra ny webos ...
Etsy ankilany, ny fanontaniana raha toa ka mifanohitra amin'ny android sy iOS izy io, fantany tsara fa ny antsasaky ny finday amidy amin'ny android dia ambany na antonony satria raha io fitsipika telo io dia mety hisy fivoahana amin'ny tizen na firefox .... fa am-pahatsorana ary na dia mavesatra ato am-poko aza izany dia tsy mino aho. Ary manantena aho fa diso aho fa zavatra iray no ilazako azy ...
1º Mangalatra tany rehefa misy orinasa malaza toa an'i Apple, Google ary Microsoft Heveriko fa somary sarotra izany. Raha tsy tsikaritrareo fa tsy anisan'ireo mpivarotra tsara indrindra i Microsoft fa heverina fa miaraka amin'ny lumia vaovao miaraka amin'ny teknolojia fahitana madio dia hiova ny zavatra
2º Tsy mitovy ny fiantsoana anao Google fa tsy Firefox, hieritreritra ny vato hoe iza no manana fampiharana bebe kokoa ???
Ankoatr'izay dia afaka mieritreritra tsara kokoa ny ratsy fantatra noho ny tsara ho fantatra izy.
Tsy te-hiteraka tsy tiako hitoby izy ireo, izay tsy tian'izy ireo. Ny tiako kokoa dia ny mahita nokia misy tizen raha hividy azy aho….
Fa ny zavatra alehako, ny olona (izay tsy tia teknolojia) dia mazàna mividy vokatra efa malaza ary tsy mahazo avy any, izany no mahatonga ahy tsy hieritreritra hoe hanana varotra marobe izany. Angamba rehefa mivarotra firefox amin'ny tsena Breziliana dia hanana varotra bebe kokoa raha toa ka milalao tombony tokoa ny vidiny.
Tsy vinavina izy ireo, eritreritra izy ireo ary averiko indray fa antenaiko fa ny mifanohitra amin'izay amiko no tsy tiako android, na oviana na oviana!
Tsy hitako malefaka ilay izy. maimaimpoana raha misy izany dia hijanona tsy hanavao ny telefaona finday rehetra intsony ary handany mihoatra ny windows (iza no hilaza amiko izay holazaiko ????).
Raha ny marina dia manana x6 miaraka amin'i symbian aho ary tena faly aho fa fantatro ihany koa ny halaviriko.
Manantena aho fa diso aho ary manova ny tontolon'ny finday avo lenta ny tizen!
Miarahaba ary manantena aho fa tsy mahita ny mpiasa sy ny bilaogy miboridana loatra.
Iray amin'ireo olana lehibe tokony hodinihina ireo tompokolahy, ary tiako hovakianareo, ny fananan'ireo rafitra ireo fomba isan-karazany, na dia tsy miantoka ny fahombiazany aza izy ireo dia manome tosika azy ireo.
Voalohany indrindra, ary hiresaka manokana momba an'i Tizen sy FirefoxOS aho. Samy manana ny maodelim-pivoarana ireo sehatra roa ireo, izany hoe HTML5, noho izany, samy hanolotra mivantana amin'ireo mpamorona ny fahafaha mamorona zavatra miasa mitovy tsara amin'ny sehatra roa, ary mazava ho azy fa amin'ny mpitety sy birao (miankina amin'ny izay rehetra tianao). Ity dia zavatra azon'ny Android sy IOS atao, eny, saingy tsy dia mandaitra satria tsy ananan'izy ireo ho toy ny ivom-pandrosoana ho an'ny teratany ary tsy nohamarinina ho an'ity karazana fampiharana ity, izay ataon'ny FirefoxOS sy Tizen.
Amin'ny ambaratonga dokam-barotra, azo antoka fa tsy afaka mividy Mozilla amin'ny Google isika, fa i Tizen dia manana Samsung, ohatra, ary ny fananana mpanamboatra telefaona finday lehibe indrindra ho mpanorina lehibe anao dia tsy isalasalana fa tombony iray (tombony azon'ny MeeGo niaraka tamin'ny Nokia, saingy nanipy izy ireo midina). Ny anarana hoe Mozilla dia tsy tokony hatao ambanin-javatra ihany koa, satria tsy malemy izy io ary tsy miaraka miaraka aminy ratsy; miaraka amin'i Telefonica sy trano telefaona maro hafa, tsy lazaina intsony ny fanohanan'ny ZTE sy ireo mpanamboatra isan-karazany. Manome ampinga kely ireo sehatra roa ireo.
Ankehitriny eo amin'ny lafiny fanavaozana, tsy maintsy ekeko fa Tizen no mandray ny mofomamy ary ny FirefoxOS, na dia tsy mirehareha amin'ny fandrosoana ara-teknolojika goavana aza izy, dia manana ny fahamendrehana ho rafitra iray natao hiasa toa ny avo lenta amin'ny telefaona midina ambany. Manao izany ve i Android? sa tsara kokoa nobeazina Mety tsara ve?
Ny Tizen dia tsy hoe manana HTML5 ho sehatra natorony fotsiny, fa mampiditra ny tranombokin'ny tetikasa Enlightment (mpamorona ny E17), izay mamela ihany koa ny famoronana rindran-tany zanatany sy ny interface maivana sy maivana ary mahery amin'ny C, na dia tsy ho toerana misy anao aza izany. sehatry ny fampandrosoana Ho tohanana izy ary hamela azy hitombo be.
Betsaka ny zavatra tsy maintsy raisina nefa misy zavatra azo antoka ary izany dia ireo roa nolazaiko ireo, manana ny mety hiadiana ary angamba hahomby.
Voalohany indrindra, izy rehetra dia manolotra zavatra izay na Android na IOS dia tsy afaka manolotra mifanentana tanteraka amin'izy ireo, eny, mifanentana, afaka mamorona rindranasa ho an'ny Firefox OS aho ary azoko antoka fa azoko atao ny mitondra azy tsy mila olana hafa amin'ny Tizen na Open WebOS. Fa maninona Eny, satria nisafidy ny hampiasa ny fenitra manandanja indrindra amin'ity taona ity sy ny manaraka izy telo ireto: HTML5 ary iray madio, ... fandaharana izay tianao, ataovy anaty browser izany ary azonao antoka fa handeha izy io ao amin'ireo rafitra telo ireo, teboka
TANDREMO FA TSY MARINA IZAO !!
Isaky ny "fenitra" no tononina ary vao mainka aza raha misy zavatra avy any Mozilla mihodina eo afovoany dia variana ny olona ary tsy mahita ny mason-tsipiriany.
Marina fa misy ampahany tsara miorina amin'ny fenitra HTML5 sns; Tandremo anefa fa misy litera kely !! TSY IZAY REHETRA.
TSY MARINA IZANY fa raha manao zavatra amin'ny Firefox OS ianao dia hiasa amin'ny hafa izany, satria TSY MARINA fa ny zavatra rehetra dia hiorina amin'ny fenitra sy HTML5 ary zavatra mahafinaritra hafa.
Firefox OS dia hanana API sy zavatra hafa TSY MISY STANDARD, zavatra izay na dia izy ireo aza dia milaza fa mazava ho azy fa milaza izany amin'ny fandriky ny "Ireto no zavatra hatolotsika ho eken'ny W3C", saingy mazava ho azy fa hampihatra azy ireo IZAO, ireo mpampiasa dia hampiasa azy io IZAO satria "fenitra" Santa Mozilla ary avy eo ho simba ny hafa satria tsy hampiasa ireo zavatra tsy mahazatra na izy ireo dia tsy maintsy mampihatra izany manandrana maka tahaka azy maminavina, mazava ho azy ao ambadiky ny fatiantoka foana ary hanana toe-javatra mitovy amin'ny isika amin'ny mpizaha! "programa ho an'ny Firefox" geeks ary ny hafa tsy mifanaraka "fa izy ireo no ho diso satria ny Firefox dia San Standard ary manao zavatra tsara."
Ny zavatra ratsy indrindra dia amin'ny famaranana, ny W3C dia tsy maintsy miady amin'ny fenitra diso iray izay an-tsokosoko terena hiditra ary efa ampiasaina; ary indray ny fifaninanana dia hohitsahin'ilay malaza indrindra mametraka ny fananany ary manao ny programa geeks rehetra azy ho toy ny fitsipika "mahazatra".
Samy manana ny maodelim-pampandrosoana ireo sehatra roa ireo, izany hoe HTML5, ka izany no antony anoloran'izy ireo ny mpamorona ny fahafaha mamorona zavatra mandeha tsara amin'ny sehatra roa.
TANDREMO FA DISO IZAO !!.
Toy ny hoe tsy ampy ny antony teo aloha, mbola misy ihany.
Izay an'ny "Ataoko amin'ny iray ary hiasa amin'ny ambiny tsy misy olana satria mandeha amin'ny fenitra" Tsy marina izany, ny zava-misy sy ny zava-misy dia mampiseho fa diso fiandrianana io, azontsika jerena amin'ny Internet. Amin'izao fotoana izao ny tranonkala dia mazàna atao amin'ny Firefox "satria io no fenitra" ary mazava ho azy fa ny "browser" dia miafara amin'ny "mifanaraka" amin'ny tranonkala maro an'isa noho ny sisa amin'ny browser, fa rehefa mampiasa browser hafa ianao dia hitanao fa tranonkala "Standard" maro no tsy mahomby eto na any. Raha io no isan'andro amin'ny tranonkala, betsaka kokoa ny ho ao anatin'ireny andrana OS ireny.
Manonona manokana fa ny fotony eto dia HTML5, izay tsy namboarina ho fenitra feno mihitsy mba hahatongavana amin'ireo rafitra fototra, fampiharana ao aminy. Alaivo an-tsaina hoe inona no hitranga raha miova ny famaritana, na raha tsy mitovy ny fampiharana ny safidy samy hafa, izay samy ara-dalàna avokoa. Izany helo izany dia efa mitranga amin'ny zavatra efa nohamarinina hatry ny ela, alao sary an-tsaina amin'ny HTML5 fa eo am-panaovana izany.
Raha fintinina, ny filazana fa hahafinaritra ny zava-drehetra satria izay hataon'ny olona iray ho an'ny olon-drehetra dia nofinofy tena tsara hino, fa ny nofinofy dia mitoetra; ny fanaovana rindranasa ho azy ireo dia ho aretin'andoha ihany toy ny fanaovana tranokala ankehitriny, raha ny miankina amin'ny "fenitra" tsy voafaritra sy "tsy fenitra" tsy voafaritra ihany, izany hoe ho ratsy kokoa noho ny panorama efa misy ao amin'ny tranonkala.
Tsy ratsy velively ny fifaninanana, ny marina tsy izy, fa indraindray aho mipetraka mieritreritra fa efa be loatra ny tetikasa te-hitady toerana tokana eny an-tsena ary miaraka amin'izay dia miady amin'ny tsena miaraka amin'ireo Android goavambe. ary IOS.
Heveriko fa tsy miova ary raha ny marina dia mieritreritra aho fa arakaraka ny maha-tsara azy kokoa, saingy rehefa mandeha ny fotoana dia tsapako fa tsy mandeha mankaiza ianao, ny ezaka ihany no mizarazara satria ny tena antony manosika hanao zavatra dia ny fitiavantena, ny tanjona dia «yo Tsy maintsy izaho no mamaky azy, ”izany no tsy misy fiaraha-miasa ary samy manintona ny ankilany ny tsirairay.
Ity tranga ity dia mitovitovy kely kokoa, ny «Firefox OS» dia mivoaka miaraka amin'ilay hevitra efa ampiasain'ireo rafitra hafa ireo, fa tsy manampy azy ireo ary mampatanjaka azy ireo ary angamba hahomby, dia mivoaka miaraka amina safidy vaovao manomboka amin'ny tsy fahafantarana ny hafa satria ny zavatra voalohany ataony dia ny fivarotana ny tenany ho foto-kevitra sy ny revolisionera (ilaina ny fanaovana izany hipoitra momba azy sy hamoronana ny fotoana).
Te-hiteny aho hoe: «... ampahany amin'ny tsy firaharahana ny hafa satria ny zavatra voalohany ataony dia ny fivarotana ny tenany ho hevitra * vaovao * sy revolisionera ...»
Ny zavatra mahaliana iray hafa dia ny zavatra lazainao momba ny mpitety tranonkala dia nanjary tsy dia tena misy intsony, ary raha ny tena izy, ny olona dia mivelatra indrindra ho an'ny Chrome, fa tsy ho an'ny Firefox ary ny ankamaroan'ny olana dia saika hita ao amin'ny Opera foana.
Ny hevitra dia ny rindranasa izay mihazakazaka amin'ireo sehatra ireo dia fampiharana an-tranonkala izy ireo ary azo alefa tsy misy olana lehibe amin'ny lafiny iray mankany amin'ny lafiny iray hafa ary ity, mandà izany na iza na iza mandà azy, azo tanterahina kokoa amin'ny HTML5 noho ny API teratany rehetra. toy izany.
Tsy tiako ny iantsoanao ny zavatra lazaiko hoe DISO sy LAINGA, efa namaky, nandinika ary nikaroka ihany koa aho, tsy manandrana manaparitaka na mametraka zavatra. Toy ny hoe manandrana milaza amiko ianao fa mpandainga tsy manam-pahalalana aho, rehefa nilaza zavatra tsy misy koa ianao, toy ny fivoarana ho an'ny Firefox ary ny fivoaran'ny tranonkala dia fanaintainana amin'ny hatoka noho ny tsy fitoviana, misy ifandraisany ny fahamarinana, fa isaky ny mihena izy io ary ny olana dia arakaraky ny zavatra kely sy kely kokoa.
Tsy tiako ny miantso izay lazaiko DISO sy LAINGA ... Toy ny hoe manandrana manatona anao ianao milaza amiko fa mpandainga tsy manam-pahalalana aho, nefa ianao koa nilaza zavatra tsy,
Tsy tokony handray zavatra manokana ianao, zavatra diso dia azo lazaina avy amin'ny naivety ary tamin'ity tranga ity dia nanazava bebe kokoa noho ny fomba nanehoan'ny zava-misy aho fa diso ny zavatra rehetra natorokoako.
Raha ny marina, ny valinteninao vaovao dia santionany amin'ny fahaizanao miteny zavatra izay tsy, amin'ny fampiharana lojika ratsy.
Mampifangaro zavatra ianao ary noho io lesoka lojika io dia diso roa no nataonao.
Tsy hoe afaka (hypothètique) izy ireo fa ny fenitra, ny fenitra ary ny fahalalahana dia tsy mitovy; zavatra maimaim-poana / misokatra / na izay tian'izy ireo iantsoana dia tsy zavatra mahazatra ho azy lavitra azy.
Mbola mahita matihanina maro aho, ny ankamaroany ny marina, miaraka amin'ny foto-pinoana maharitra amin'ny fanaovana tranokala ao anaty sy ho an'ny Firefox "satria ny Firefox no iray izay mampiseho tsara ny zavatra ary natao ho an'ny mpamorona"; Misy ireo izay sahirana manao ny fanitsiana ao amin'ny Chrome satria noho ny ampahany betsaka dia tsy azo odian-tsy hita intsony izy (hazavaiko fa ny "fanitsiana ny tranokala ho an'ny" dia hafa noho ny hoe 'ataovy ao anaty sy ho' ny tranokala), na dia eny, manao an-tsitrapo izy ireo "satria Chrome dia tokony hanao zavatra toa ny" fenitra Firefox ". Fa misy koa ireo tsy manao akory. Ary aleo tsy hiresaka momba ny mpitety tranonkala toa ny Opera.
Na izany aza, tsy maninona izany raha hitranga amin'ny Firefox (izay hitako foana ary toa tsy miova) na amin'ny Chrome (izay mbola tsy hitako, andao tsy afangaro ny "tranonkala namboarina" sy ny "nanao tranonkala") na any Fulano, lazao fotsiny izany anarana manokana izany satria izany no zava-misy ankehitriny ary satria io mpilalao io koa dia mihetsika amin'ity sarimihetsika hafa ity ary mora be ny mieritreritra fa hisarika ny saina rehetra indray izy.
Mbola averiko ihany fa ny zava-dehibe dia tsy ny tarehin-tsoratra, aleo hadino ny momba azy ireo raha mitaona anao hitongilana ny anarany; ny zava-dehibe momba ny lazaiko dia ny fampiharana, ny tena olana eto dia:
1) na dia misy aza ny fenitra dia tsy feno na lafatra ny fampiharana; lafin-javatra izay tsy maintsy ampitomboina isaky ny safidy (browser / os),
2) ireo tranonkala dia natao ho an'ny mpizaha ary avy eo dia mila miteraka (latsaka na mihoatra) ianao amin'ny fanitsiana ny ambiny ary maro no tsy manelingelina akory ary izany dia namorona ny zava-misy ankehitriny izay misy ny "browser's developpeur" The de facto standard "mampiseho tranokala tsara" ary ny sisa tsy.
Ireo zavatra roa voalaza etsy ambony ireo dia zava-misy, mety tsy tianao ilay izy fa tena misy. Raha mora toy ny hoe "manao zavatra amin'ny HTML aho ary mety ho an'ny rehetra" ny scenario ankehitriny dia tsy ho izay ananantsika ary hanana mandritra ny fotoana maharitra.
Mety tsy tianao ny hahatsapa ho "mpandainga", fa ny lazaiko dia tohanan'ny zava-misy, ianao aza voatery niaiky fa tena marina izany, tsy mandainga aho na diso.
Mifanohitra amin'izany, ny tohan-kevitrao tokana dia ny fanantenanao tsara fa hihatsara ny zava-drehetra satria araky ny kristaly "mihena isaky ny fotoana" izy, na mampiasa ny marika hoe "tsy dia tena izy" toy ny hoe nisy zavatra "tsy dia tena izy", sa tsy misy?; na misy ny zavatra na tsia.
Rehefa tsy mitranga ireo zavatra ireo dia midika hoe rehefa "tsy misy" izy ireo dia mety ho marina ny fanambaranao tany am-piandohana, mandritra izany fotoana izany tsy izy ary izay hivarotanao ho diso ary marina ny milaza fa TSY MARINA ary Mila mitandrina ianao amin'ny mahamenatra anao ary tsy mahita ny antsipirihany satria hitarika antsika amin'ny hadisoana mahazatra izy ireo, amin'ny famonoana ireo safidy sasany manohana ny malaza indrindra ary amin'ny fampiasana sy fanamafisana ireo zavatra tsy manara-penitra.
Heveriko fa mitovy ary raha ny marina dia mieritreritra aho fa arakaraka ny maha-tsara azy kokoa, saingy rehefa mandeha ny fotoana dia tsapako fa tsy mahazo mankaiza ianao, ny ezaka ihany no mizarazara satria ny tena antony manosika hanao zavatra dia ny fitiavantena, ny tanjona dia ny hoe "Izaho no tokony hanaparitaka azy", izany no tsy misy fiaraha-miasa na iza na iza ary samy manintona ny andaniny avy.
Ity tranga ity dia mitovitovy kely kokoa, ny "Firefox OS" dia mivoaka miaraka amin'ilay foto-kevitra mitovy amin'izay efa ampiasain'ireo rafitra hafa ireo, fa tsy manampy azy ireo ary mampatanjaka azy ireo ary mety hahomby, dia mivoaka miaraka amina safidy vaovao manomboka amin'ny tsy fahalalana ny hafa satria ny zavatra voalohany ataony dia ny fivarotana ny tenany ho foto-kevitra sy revolisionera (ilaina ny fanaovana izany hipoitra momba azy sy hamoronana ny fotoana)
Tsara hatrany ny fifaninanana, andao, aleo hifantoka amin'ny IOS daholo isika, andao hanome an'i Apple na Google ampihimamba amin'ny Android, andao hitohy, mba hahafahan'ny fifaninanana rehefa afovoantsika ny zava-drehetra.
Tsy misy dikany amiko izany bro.
Toa miresaka mandroso sy miverina ianao.
Novaliako fa tamin'ny fitanisana ampahany iray izay niresahanao ny safidy marobe te hanasongadinana fa efa be loatra izy ireo.
Ny hevitro ihany no nozaraiko (talohan'ny nanovanao azy) ary nohazavaiko ny antony.
Ary tiako ny hanazava fa tsy nilaza na nanao zavatra nitovy tamin'ny fifonana aho tamin'ny hoe "tsy tokony hisy safidy" "tokony homenao ny ampihimamba ho an'i Apple na Google", toa ny tianao holazaina ankehitriny, izay azonao Tsy haiko ny antony; Mifanohitra amin'izany no ilazako fa ny safidy tadiavin'izy ireo sy ahafahany manokatra ny kianja dia voatafika sy mifaninana aloha, satria isaky ny misy olona maniry ny ho "izaho izay manapaka azy" fa tsy manampy ny ambiny dia manomboka izy ireo. manohana azy ireo, mizara sy mampihatra fomba fanao izay hiafara amin'ny famoahana ny hafa. Ny olana dia tsy hoe misy safidy, ny olana dia efa MISY IZY nefa tsy misy manandra-doha satria tsy manatanjaka azy ireo dia misy olon-kafa mivoaka te hanao toy izany koa nefa miteny hoe YO YO YOYOYO.
Azoko atao ihany koa ny mamaly amin'ny fomba milay amin'ny filazako azy «Avia, omeo an'i Apple sy Google ny ampihimamba rehetra, aza avela hanamafy ny Meego / Webos / Tizen /…, fa aleo mametraka safidy bebe kokoa toa ny Fireox OS na izay tian'izy ireo hatao mitovy amin'ny hafa, izay hahomby amin'izany rehetra izany milentika ireo mpisolo toerana, tsy misy mitsangana ary arak'izany dia miharo ny mpanjaka ankehitriny ».
Raha ny teny an-tànan'ny zavatra avy any Mozilla dia tsy hoe tena afaka amin'ny tanan'i Google isika.
«» »Ny iray kosa mampiasa fenitra antitra, ratsy tarehy, maimbo ary maty ho fitaovana lehibe amin'ny fampandrosoana, mampiasa Java
Java dia tsy vitan'ny hoe miadana sy ratsy tarehy, tsy azo antoka ihany koa, tena tsy azo antoka, hany ka ny orinasa fiarovana dia manolo-kevitra ny tsy hametaka azy io fa manala azy amin'ny rafitra. »» »
Mazava ho azy, mazava ho azy fa iray amin'ireo fiteny roa be mpampiasa indrindra (miaraka amin'ny C) dia tsy misy dikany, inona no mitranga fa olona adala ny olona an-tapitrisany maro mivelona aminy isan'andro, misaotra fa tonga eto ianao hanazava antsika ny hadisoanay.
ary ianao ? Iza no nofatoranao?
Tsy tiako izany, maro ny tsy tia azy, efa antitra i Java ary ianao, izay niara-niasa taminy nandritra ny taona maro, dia tokony hahafantatra tsara ny fatiantoka sy ny fitsaboana omena tato ho ato ny filaminan'ny fiteny.
Miadana izy io, nihatsara nandritra ny taona maro nefa tsy olana lehibe izany ary ratsy tarehy, satria, ny olona dia miresaka momba izany hoe syntax tsotra, saingy mampivarahontsana tsotra izao ny fandikana azy; Betsaka ny manam-pahaizana no nanaiky fa tsy tokony hampianarina ho fiteny lehibe intsony ny Java satria izy ireo dia manalava ny fampiasana fiteny iray izay tsy tokony hoforonina intsony ary raha misy izany dia satria manana tobindehibe mpamorona marobe, mpamorona matotra (amin'ny heviny izay efa niasa nandritra ny taona maro), fa ny mpamorona vaovao kosa misafidy fiteny hafa, mitadiava vahaolana hafa ary tsy tianay ireo fiteny toa io Ary tsy ny tiako holazaina amin'ny ankapobeny satria manana namana tia an'i Java aho.
Ankehitriny, raha manelingelina anao fa ny Java-ko dia banga tanteraka, tena ratsy. Nijery an'i Java aho tamin'ny semester lasa teo ary nankahala azy. Tsy izany no natao tamin'ny C na C ++, izay lafo tamiko, saingy nampianatra ahy be dia be izy ireo. Inona no nataon'i Java? Nandalo aho satria nianatra OOP niaraka tamin'i Python sy tamin'i Ruby, arivo heny kokoa ny fifandraisana sy ny fampiasana, na dia tsy dia haingana loatra aza izy ireo satria tsy voaangona (na dia i Python aza dia azo angonina arakaraka ny Famatorana izay ampiasaina).
Tsy te hanazava anao momba ny hadisoanao aho, any ianao raha te hanohy fandaharana miaraka aminy ianao fa tsy hifanaraka, saingy efa sitrana aho mahita ireo namako sy ireo nahazo diplaoma izay mangataka azy ireo hatrany ny zavatra toy ny serivisy mifindra monina avy any PHP mankany Django. na Rails, soraty indray ireo programa Java ho C ++ sy Python. Inona koa, na dia mbola karohina aza ireo olona miara-miasa amin'i Java, dia mijanona hatrany i Java noho ny Android.
Miala tsiny aho raha manelingelina anao ny zavatra nolazaiko, saingy misy adihevitra vitsivitsy manohitra an'i Java, raiso araka izay itiavanao azy, tsy hiresaka izany intsony aho.
jupa1986 dia hoy izy:
Izahay koa dia ireo olona tia java, ho an'ny fikojakojana kaody dia toa tsara kokoa amiko, mitovy amin'ny tranonkala ihany, ary tsy hoe misy olona tsy te-hampifanaraka satria manana rafitra marobe i java heveriko fa tsy hitanao raha nampiasa azy io tany amin'ny oniversite fotsiny ianao mba hianarana OOP ary momba ny HTML5, na Facebook aza tsy maintsy nilavo lefona tamin'ny HTML5 ary tsy maintsy nanao fangatahana zanatany ho an'ny iOS sy android, azoko tsara fa hisy ny fanatsarana hahatonga azy ireo tsara kokoa fa izany dia mampiseho fa tena maintso ny HTML5 handehanana eny an-tsena. Mamolavola rindranasa tranonkala 3 taona lasa aho ary mampiasa firefox ho referansa, ary avy eo hitako ny fomba fanamboarana azy io ho an'ny mpitety tranonkala hafa ary mijanona hijoro ho an'ny android hatrany i Java hoy aho aminao fa mitombo ny java ho an'ny fireneko, misy zavatra mitranga ao amin'ny tanànanao na ny taninao dia tsy midika hoe mitranga izany amin'ny ambin'izao tontolo izao.
Valiny tamin'ny jupa1986
Oberost, isaky ny mahita fanehoan-kevitra toy ny: "Ny be mpampiasa indrindra", "ny be" ... Mieritreritra an'i Windows foana aho, izay tsy ny tsara indrindra satria io no OS be mpampiasa indrindra ... sa izany?
Java dia tsy milaza fa fiteny ratsy ho an'ny mpandahatra fandaharana fa eny, zavatra tsy zakan'ny mpampiasa tsotra izy io, tsy ny fiteny tsara indrindra hanaovana programa desktop no tiako kokoa, aleoko C ++ / QT na GTK teo aloha, na mampiasa C # izay tena tsotra ary miendrika windows, fa ankehitriny i Java dia azo ampitahaina amin'ny Flash fa tsy satria iray amin'ny be mpampiasa indrindra dia tsara.
nanao toa anao manana mpankafy (mpamaky) hehehe-
Ny marina dia tsy manintona ny saina ny iô, koa manana fitaovana iray fotsiny ianao ary raha tsy tianao ny endrika dia mampalahelo anao.
Raha ny momba ny android dia efa nanandrana aho ary misy zavatra manosika ahy hanao, satria ny zavatra rehetra dia misy ifandraisany amin'ny gmail ary miezaka ny mifanerasera amin'ny mailaka hafa izay tsy gmail indraindray dia fampijaliana, zavatra iray hafa koa ny fisian'ny fampiharana marobe nefa ny marina, iza no ampiasaina ary firy no zavatra ratsy vita fotsiny?
fehin-kevitra Tsy tiako android satria indraindray toa tapitra ny tapany.
Niverina tany blackberry aho izao, raha tsy tantanana toy ny android ny os 7, fa farafaharatsiny mandefa mailaka tsy misy olana aho ary izay tsy ilaiko dia tsy manana olana maro aho, miandry ny hafa hahita izay mitranga aho (meego Tiako izany fa lafo loatra ny n9 ary tsy haiko raha afaka mametraka fampiharana sasany ianao)
azafady, Andrelo fa tsy mpamaky no hosoratako
Nanaitra ahy ny fifantohan'ny firefox amin'ny finday ambany, tena hendry tokoa aho fa rehefa mandeha ny zava-drehetra rehefa mihetsika ny tsena.
Manantena aho fa nanampy ahy ny Java, saingy nahasosotra ahy fotsiny izany. Iray amin'ireo manohana ny fianjeran'i Java aho.
Mikasika ny Facebook, azafady, fa rehefa mila fampiharana avo lenta ianao dia tsy mampiasa html5, mampiasa API natoraly ianao hiasa tsara kokoa amin'ny loharano, na dia manidy ny fahafaha-manao fandrakofana bebe kokoa aza. Ny «tena maintso» dia fialantsiny mora vidy.
Raiso ihany koa fa ireo rafitra vaovao ireo dia hanana HTML5 ho zanatany ary midika izany fa ho haingana kokoa ny fampiharana noho ny karazana fampiharana.
Java amin'ny tranonkala ve izao? avy amin'andriamanitra tsara kokoa ny mampiasa pais sy martilyo na PHP, tsy dia manana Python sy Ruby.
Mijanona tsara foana aho, notazonin'ny Android i Java ary ny hadalana "manompo izy ary ampiasaiko, tsy mila bebe kokoa aho."
Na izany na tsy izany dia samy manao sy manafoana ny rehetra
Ny Java dia tsy ny Android ihany no mitazona azy, fa ny 99% ny finday, na inona na inona OS ampiasainy.
Tsy mahalala na inona na inona momba ny java aho, saingy fantatro fa tena matanjaka be ny HTML5. na dia izany aza, ny mpampiasa iraisana dia tsy manome ny fomba fiasan'ny telefaoniny. ny asany fotsiny no tadiaviny. ary indrisy fa nilanja lanja be (mendrika na tsia) ny anaran'ireo Android sy iOS ka irariana ny firariana ho an'ireo rafitra vaovao.
Mandidy ny hametaka partitions mora foana amin'ny alàlan'ny fstab
Ireo lohateny <° FromLinux ao amin'ny Conky-nao